सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षककै निर्देशनमा मुख्यालयमा आगलागी ! – Online National Network
सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षककै निर्देशनमा मुख्यालयमा आगलागी !
१२ पुष २०७४, बुधबार ०३:००
काठमाडौं, १२ पुस — सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयमा चार गते भएको आगलागी घटनाबारे एकपछि अर्को रहस्य खुल्दै गएको छ। सशस्त्र प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यहाँ भएको अनियमितता सम्बन्धी छानविन गर्न मागेको कागजात नष्ट गर्ने उद्देश्यले नियोजित ढंगबाट कागजात जानाजान आगलागी गरिएको बताइएको छ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरिक्षक सिंहबहादुर श्रेष्ठको निर्देशनमा आगो लगाइएको सशस्त्र उच्च स्रोतको दावी छ। पुष तीन गते आर्थिक प्रशासन निर्देशनालयका प्रमुख एसएसपी अभि खत्रीले अख्तियारमा कागजात बुझाउन तयार पारी गाडीमा राखेपछि आईजीपी श्रेष्ठलाई जानकारी गराउँदै पठाउने अनुमति मागेका थिए । तर श्रेष्ठले तत्काल नबुझाउन भन्दै स्टोरमा राख्ने निर्देशन दिएका थिए । उनको निर्देशन बमोजिम तयार पारिएको कागजात स्टोरमा राखिएको भोलिल्ट ति कागजात आगलागीमा परि नष्ट भएको हो।
आगलागी गरेको आरोपमा सशस्त्र प्रहरी हवल्दार रामकुमार श्रेष्ठ प्रहरी नियन्त्रणमा परेपछि आगलागी भवितव्यमा परि नभइ योजनावद्ध रुपमा भएको पुष्टी भएको हो।
पेट्रोल छर्केर आगो लगाउने क्रममा हवल्दार श्रेष्ठको ज्याकेट जल्नुको साथै मुखमा समेत आगोले पोलेको तथ्य फेला परेको थियो ।
घटनास्थलमा जलेर घाइते भएका हवल्दार श्रेष्ठ त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराउन पुगे पछि त्यहाँ सादा पोशाकमा रहेका नेपाल प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
पछि उनलाई किर्तिपुरको एउटा स्कीन अस्पतालमा उपचार गराइएको थियो ।
आगलागी घटना हुनुभन्दा केहि दिन अघि शसस्त्र प्रहरीका दुई जवान रोवित थापा र रोज गोलेले मुख्यालय भित्र आगो निभाउने यन्त्रहरु कहाँ कहाँ छन् भन्ने विवरण समेत संकलन गरेका थिए।
पूर्व आइजिपी वन्त पनि शंकामा
एक साता अघि सशस्त्र प्रहरीको मुख्यालयको लेखा शाखामा भएको आगजनी घटना सशस्त्रकै पूर्वआइजीपी कोषराज वन्त पनि शंकाको घेरामा छन्।
पूर्वआइजीपीहरू वन्त, सनतकुमार बस्नेत, शैलेन्द्र कुमार श्रेष्ठ र बासुदेव ओली विशेष अदालतमा मुद्दा धाइरहेका छन्। उनीहरुलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको हो।
तर, अख्तियारले आइजीपी वन्तको कार्यकाल २०६९-०७० देखि ०७२ सम्मको आर्थिक कारोबारको फाइल अनुसन्धानका लागि मागेपछि श्रेष्ठले प्रमाण नष्ट गर्ने उद्देश्यले आगजनी गराउने भुमिका खेलेको आशंका सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा छ।
हवलदार नै कसुरदार भएको अर्को आशंका
सशस्त्रमा सामान ढुवानी शिर्षकमा नक्कली विल खडा गरेर भ्रष्टाचार गरेको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अनुसन्धानकोक्रममा सशस्त्रको ३ सइ र एक हवल्दार निलम्बनमा परेका छन् । भ्रष्टाचारमा हवल्दार श्रेष्ठ समेत संलग्न हुनसक्ने देखिएपछि अख्तियारले बोलाएर उनको बयान लिई आवश्यक कागजपत्र मगाएको थियो ।
कागजपत्र बुझाउँदा आफु भ्रष्टाचारमा तानिने भएपछि उनले प्रमाण नष्ट गर्न फाइल स्टोरमा लगेर राखी आगो लगाएको एकथरीको आशंका छ । तर यो तथ्यलाई भने मातहतका कर्माचारीलाई फसाएर हाकिमहरु उम्कने उपायको रुपमा मुख्यालयमा टिप्पणी हुने गरेको छ।
महानगरीय अपराध महाशाखाले श्रेष्ठलार्इ मंगलबार पक्राउ गरेपछि उनले पेट्रोल छर्किएर आगजनी गरेको खुलेको छ।
अपराध महाशाखाका डिएसपी प्रजित केसीका अनुसार पक्राउ परेका श्रेष्ठले आगो लगाएको स्वीकार गरेका छन्।
गृहमन्त्रालयले सहसचिव सहसचिव कृष्ण रावतको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन टोली गठन गरेको छ।
हामा कुरा डटकम बाट